फोटो फिचर Archives - VOICE OF NEPAL TV
Monday September 20, 2021 |
लन्डनमा १२ औं नेपाली मेला भब्य रुपमा सम्पन्न ( फोटोफिचर )
लन्डन। तमु धिं यूके र नेपाली दूतावास लन्डनले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको मेला आइतबार अगस्ट २९ तारिख मध्यान्ह केम्पटन पार्कमा सम्प‍न्‍न भएको हो । मेला भव्य समारोहबीच प्रमुख अतिथि बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगर, तमु धिं यूकेक...
कार्टून अफ द डे
कार्टूनिष्ट @LX Nepal...
भैंसी चढेर प्रहरी गस्ती ( फोटो फिचर )
‘बफेल्लो पोलिस’ । अर्थात् ‘भैंसी प्रहरी ।’ ब्राजिलको माराजो टापूमा भैंसी सिपाहीहरु प्रसिद्द छन् । हो, यो पर्यटकिय क्षेत्रका प्रहरीहरु भैंसीमा चढेर गस्ती गर्छन् । उनीहरु ‘वाटर बफेल्लो’ (भैंसी) मा चढेरै ब्रजिलको माराजो टापूका सडकमा गस्ति गर्छन् । त्यहाँ प्रसिद्द कलाकार बम बार्लीका प्रशंसकहरुको भिड लाग्छ । तिनलाई ख...
स्किजोफ्रेनिया, माउजर र मेरा पुस्तकहरु
लिलाराज खतिवडा /नेपाल प्यारानोइड स्किजोफ्रेनियासँग केही वर्ष धमाधम लडेपछि हार खाएर सन् २०१४ मा एउटा माउजरको तलाशमा म मुम्बई पुगेको थिएँ । आफ्नै टाउकोमा गोली ठोक्न मन थियो । कुनै अनकण्टार जङ्गलमा गएर आफैँलाई टप्काउने अन्तिम इच्छा थियो । तर जाँदाजाँदै बाटामा जातीस्मरण हुनपुग्यो । जातीस्म...
लकडाउनमा साईकलमा सरर …
- गणेश पाण्डेय। कोरोना महामारीले गर्दा संसारभरका सबै मुलुकहरुले आफ्नो देशको सिमा लक गरे। स्थल यातायात लक गर्दै शुरु भएको लकडाउन पछिल्लो समयमा अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय उडानहरु पनि ठप्प भए। पोर्चुगल पनि लकडाउनकै अवस्थामा छ। देशमा लागु गरिएको संकटकालले तीन चरण पार गर्दै आज मध्यरातिबाट अन्त्य हुदैछ। यहीबिचमा ...
जब लकडाउनमा समाचार संकलन गर्न निस्केका फोटो पत्रकारको आँखा इँटाभट्टाका श्रमिकको पिडाले भिजे, पिडितहरुलाई बाढे यसरी राहत !
– रमेश लम्साल, काठमाडौँ | माटोमा खेल्दाखेल्दै छविलाल मगरका हात र खुट्टा चर्चरी फुटेका छन् । रगत चुहिन मात्रै बाँकी छ । फुङ्ग उडेको अनुहार, वर्षौं ननुहाएको जस्तो कपाल र मैला कपडा । भित्र पसेका गाला अनि कमजोर शरीर । उमेर भने ५६ वर्ष । ललितपुरको झरुवाराशीमा रहेकोे बज्र इँटाभट्टामा काम गर्न सल्यानदेखि काठमाडौँ झरेक...
इँटाभट्टा मजदूरका पिडा – ‘रोगलेभन्दा भोकले मार्ने भयो’
- प्रदीपराज वन्त सुनिल अछामी १४ वर्षको मात्रै भए । उनि कक्षा पाँचमा पढ्दा पढ्दै पैसा कमाउने लोभमा परे । बाबा आमा पनि काठमाडौँको खाल्डोमा हान्निए । रामेछापबाट काठमाडौँ छिरेका अछामी ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका– १३ झरुवाराशीमा रहेको बज्र इँटा भट्टामा खच्चड धपाउने काम गर्छन् । ‘धुलोमा खेलेर हामीले धेरैका घर ब...
इटाली मा क्वारेन्टाइन ? अटेरी नेपल्सबासीहरु ! ( फोटो फिचर )
इटाली मा क्वारेन्टाइन ? अटेरी नेपल्सबासीहरु ! नेपल्समा सडकहरू कोरोनाभाइरस महामारीको बावजुद पनि भरिएका छन् ! ...
युद्ध मैदानमा जानु भन्दा अघि अमेरिकी सेनाहरुका परिवारहरूको भावुक तस्बिरहरू !
युद्ध मैदानमा जानु भन्दा अघि अमेरिकी सेनाहरुका परिवारहरूको भावुक तस्बिरहरू ! ...
वाईल्डलाईफ फोटोग्राफर विमिताको क्यामेरामा कैद चराहरु (फोटो फिचर )
चितवन । हरियो रंगको पोषाक काँधमा ठुलो लेन्स भएको महङ्गो क्यामेरा , नेचर गाईड विमिता भण्डारीको विशेषता हो । विगत ९ वर्षदेखी उनी सौराहामा क्रियाशिल छिन । वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर २४ वर्षीय भण्डारीकाृ पछिल्लो परिचय हो । जंगलमा पर्यटक घुमाउने मात्र होईन प्रकृतिमा देखिएको कुरा उनले क्यामेरामा कैद गरिहाल्छिन । ...
यिनै हुन् टिकटक लाइभबाटै दैनिक १ लाख १५ हजार कमाउने नेपाली ( भिडियोसहित् )
नेपालमा कोरोना : संक्रमित हुनेभन्दा संक्रमणमुक्त हुने तेब्बर !
आइतबार यो वर्षकै सबैभन्दा कम संक्रमित थपिए !
कार्टुनिष्ट रविन सायमिले सरकारबाट प्राप्त ‘प्रबल जनसेवा श्री’ विभूषण नलिने !
प्रचण्डपत्‍नी सीतालाई सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री पदक
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा ८ जनालाई माफी, ५ सय २३ जनाकाे कैद कट्टा
२४ ट्राफिक प्रहरी: जो घूस अस्वीकार गरेर सम्मानित भए !
प्रधानमन्त्री देउवाको सरकारले दुई महिनामै निराश बनायो : गगन थापा
नेपालमा कोरोनाबाट ११ हजार बढीको मृत्यु !
कांग्रेसद्वारा थप ७ जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक